कलिउड Archives - Page7of 8 - www.kchhakhabar.com
यी हुन् उमेरको अन्तर धेरै भएका नेपाली सेलिब्रेटी जाेडी
काठमाडौं, नेपालीमा एउटा उखान छ ‘जुत्ता हेर्दा ठूलो हेर्नु पर्छ, बुहारी हेर्दा सानो ।’ यो उखान धेरैको जीवनमा लागु हुन्छ । तर कसै कसैले यति सानो उमेरको श्रीमती ल्याउँछन् कि सबैलाई अचम्म पार्छ । समान्य मानिसदेखि राजनीतिज्ञ होस् या सेलिब्रेटी । उनीहरुले पनि आफू भन्दा धेरै कान्छी उमेरकी केटी विवाह गरेको पाइन्छ । अझ खाईलाग्दो ज्यान । आर्कषक व्यक्तित्व । अभिनयमा अब्बल, अभिनेताहरुका बढी महिला फ्यानहरु...
रेखा थापाले राखिन् दुईवटा डुंगामा खुट्टा, डुब्लिन् कि उत्रेलिन् ?
काठमाडौं, ३ माघ । पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेकी नायिका रेखा थापाले एकपछि अर्काे चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण पश्चात गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध नायिका रेखा आगामी चुनाव लक्षित कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेकी छिन् । तर, राजनीतिक व्यस्ततासँगै उनले दुई वटा चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । यसअघि घोषणा गरिएको चलचित्र ‘कसले च...
यतिबेला फ़ेसबुक बजारमा हटकेकको रुपमा लिएको,निकै तातिएको, सबैको फ़ेसबुक भित्ता भित्तामा शेयर र ट्यांग भेटिएको, वाहवाहीको स्टाटस र कमेन्टहरु लेखिएको, कुरा हो फिल्म छक्का पन्जाको । युट्युबमा सार्बजनिक हुनु एक दिन अगि मात्र फ़ेसबुकमा सार्बजनिक भएको कारणले पनि फेसबुक बजार अझ धेरै तातियो।धेरैले हेर्न र शेयर गर्न भ्याए । र युट्युबमा अपलोड भए पछि झन् शेयर र ट्यांग बढे फेसबुक छक्का पन्जामय भए र हुदैछन् । ...
काठमाडौं । बलिउड सुन्दरी नायिका प्रियंका चोपडाले बनाउने भनिएको नेपाली फिल्ममा कस्ता नेपाली कलाकार छानीएलान् ? भन्ने चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ । प्रियंकाले बनाउने नेपाली फिल्ममा सम्पुर्ण कलाकार नेपाली भाषी हुने भएपछि कलाकारहरुले पनि आँफु छानीन पाए भन्ने चासो देखाउन थालेका छन् । जसमध्ये अभिनेता सुनिल थापाले प्रियंकासँग काम गर्ने पक्कापक्की भएको छ । ‘पउवा’ अर्थात ‘पाहुना नाम दिइएको फिल्ममा अन्य कल...
श्वेता भन्छिन्, ‘म अब अरु कसैको हुन सक्दिनँ । बाँचुञ्जेल अर्को विवाह गर्दिनँ । कसम
मलाई मेरो जिन्दगीले केवल ३० दिनको मात्र साथ दिएर भगवानको प्यारो होला भनेर सपनामा पनि चिताएकी थिइनँ। मलाई मेरो जिन्दगीले किन यति धेरै कठोर परीक्षा लिएको होला ? यदि साँच्चै भगवान छ भने, मलाई भगवानसँग यही कुरा सोध्न मन लागेको छ–किन यति धेरै मलाई दुःख दिएको भनेर! मैले के नै विराएको थिए र ? यति धेरै भगवान मसंग किन क्रुर बनेको होला ? मलाई यसको जवाफ चाहिएको छ। भर्खरै मात्र हाम्रो घरजम हुन लागेको बेलामा म...
केकी भन्छिन् – अहिलेसम्म कसैले प्रपोज गरेको छैन
काठमाडौं पुस २३ – सिनेमा लभ सासामा शीर्ष भूमिकामा रहेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी अहिले सिनेमा लभ सासाको प्रमोशनमा व्यस्त छिन् । प्रमोशनमा व्यवस्त रहेकी अभिनेत्री अधिकारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । अहिले सम्म कतिवटा चलचित्रमा काम गर्नु भयो ? मेरो कलाकारिता यात्रा म्युजिक भिडियोबाट सुरु भएको हो । नेपाली गीतको धेरै वटा म्युजिक भिडियोमा काम गरे पछि मात्रै मलाई चलचित्रमा अफर आएको हो । सन् २०११ दे...
हेर्नुभयो लुट २ को ट्रेलर (भिडियो)
काठमाडौँ – बहुप्रतिक्षित चलचित्र लुट २ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार एक कार्यक्रबीच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । पती श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको लामो समय पछि नायिका श्वेता खड्काले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ परिवारसँग सम्वन्ध परिवर्तन गर्ने बताएकी छिन् । बुहारीको रुपमा श्रेष्ठ परिवारमा रहेकी स्वेताले अब भने श्रीको परिवारको छोरी बहिनी भएर अघि बढ्ने बताएर श्री परिवारबाट बिवाह गरेर जाने संकेत दिएकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रीको परिवारको फोटो राख्दै स्वेताले लेखेकी छन्(‘मबाट वितेका दिनहरुमा अन्जानमा ...
छविलाई सन्तान सुःख नदिएकी रेखाको आमा बन्ने रहर
एक दशक लामो रेखा थापा र छवि ओझाबीचको सम्बन्ध कहिल्यै सौहार्दपूर्ण रहेन ।आफूले ड्याडीको नाता लगाउदै आएकी छवि ओझासँगको सम्बन्ध अदालतबाटै टुंगाएर हाल रेखा थापा र छवि ओझा एक्ला एक्लै बस्दै आएका छन । एक दशकको यात्रा अदालती प्रक्रियाबाट हाल छुट्टा छसुट्टै बस्दै आएका छवि गौरीघाटमा बस्दै आएका छन भने, चावहिलस्थित अम्बे अर्पाटमेन्टमा आमा सरस्वती थापाको साथमा नायिका रेखा थापा रहँदै बस्दै आएकी छिन । एक...